Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: April 2010
ဗမာစစ်အစိုးရသည်တိုင်းရင်းသားတပ်များနှင့်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာမှာယောင်္ကျားဆိုယောင်္ကျား၊စစ်သားဆိုစစ်သားဆို သည့်စစ်သားသူရဲကောင်းသတ္တိမရှိကြပဲစစ်သားစစ်သားချင်း၊လက်နက်၊လက်နက်ချင်း၊ဓါးဓါးချင်းမတိုက်ခိုက်ရဲပါ၊ကောက်ကျစ်စဉ် လဲပြီးစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုလုပ်တဲ့အခါအပြစ်မဲ့လူထု၊ရွာသူရွာသားများကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဗျူဟာကိုသာလက်ရှိအသုံးပြုနေရပါသည်၊
အပြစ်မဲ့လူထုများကိုစစ်ဆေးမေးမြန်ခြင်း၊ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ဖမ်းဆီးခြင်း၊အဓမ္မငွေညှစ်ကောက်ခံခြင်း၊နှင့်အထူးသဖြင့်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်များနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့်သူများကိုပစ်မှတ်ထားပြီးလှုပ်ရှားနေပါသည်၊ဤကဲ့သို.အပြစ် မဲ့လူထုများ၊လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတပ်များ၏မိသားဝင်များကိုအေးအေးဆေးဆေးမနေနိုင်အောင်လိုက်လံနှောင့်ယှက်ဒု
ဗမာစစ်ဗိုလ်တွေအနေနဲ. ဖြတ်လေဖြတ်နည်းဗျူဟာဖြင့်တိုင်းရင်းသားတပ်သားများ၏မိသားစုဝင်များကိုဆက်လက်ဒုက္ခပေးပါ ကဗမာစစ်ဗိုလ်တွေရဲ.မိသားစုဝင်များကိုလည်းစနစ်တကျစာရင်းစုဆောင်းပြီးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ရပ်ကိုအကောင် အထည်ဖော်ရန်တိုင်းရင်းသားတပ်တွေစဉ်းစားသင့်ပြီလို.တိုင်းရင်းသားအသံမြင်သည်၊တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ.ဝင်များနှင့်တိုင်း ရင်းသားလူထုများနှင့်အမှန်တရား၊တရားမျှတမှုကိုချစ်မြတ်နိုးသူများပူးပေါင်းပြီးထိရောက်စွာတာဝန်ခွဲလုပ်ဆောင်သင့်ပြီဖြစ် ပါသည်၊ ဗမာစစ်အစိုးရ၏ဖြတ်လေဖြတ်နည်းဗျူဟာကိုကျုပ်တို.ပြည်သူလူထုများခံစားလာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော်ခဲ့ ပြီဖြစ်ပါသည်၊ဤမတရားတဲ့စစ်ပွဲနည်းဗျူဟာကိုတိုက်ဖျက်ရန်၊ခုခံကာကွယ်ရန်အချိန်တန်လေပြီဖြစ်ပါသည်၊ညစ်ပတ်တဲ့နည်း ဗျုဟာဘဲပြောပြော၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့နည်းဗျူဟာဘဲပြောပြောကျုပ်တို.ပြည်သူလူထုတွေကိုကာကွယ်ရမည့်တာဝန် ရှိနေသဖြင့်တရားတဲ့စစ်ပွဲလို.ပဲခေါ်ဝေါ်ရပါမည်၊
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု SSA ခေါင်းဆောင် စ၀်ယွက်စစ်ပြော
Wednesday, 28 April 2010 18:50 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
လက်နက်ကိုင်အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့များအားလုံး အသွင်ပြောင်းရမည်ဆိုသည့် နအဖ၏ တဘက်သတ် အစီအစဉ်ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် တကျော့ပြန်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု လွယ်တိုင်းလျဲန်းအခြေစိုက် SSA ခေါင်းဆောင် စ၀်ယွက်စစ်က ပြောကြား လိုက်ပါသည်။
“အပစ်ရပ်တွေက နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အပစ်ရပ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီ၊ နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းမရောက်ဘဲ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့၊ အသွင်ပြောင်းဖို့ဘဲ နအဖက တဘက် သတ်ပြောနေတာ။ လက်မခံရင် အင်အားသုံးမယ်လို့တောင် အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့တယ်။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ် ဆိုရင် တော့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာမှာမလွဲဘူး” - ဟု SSA ခေါင်းဆောင် စ၀်ယွက်စစ် ကပြောပါသည်။
လွယ်တိုင်းလျဲန်း အခြေစိုက် SSA ခေါင်းဆောင် စ၀်ယွက်စစ်
နအဖ သည် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် မဖြေရှင်းလိုဘဲ စစ်အင်အားသုံး၍ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် တပ်ဖွဲ့များအား အမြစ်ပြတ် ခြေမှုန်းလိုသောကြောင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းကောင်း မဟုတ် သဖြင့် တိုင်းပြည်ပြဿနာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာစေမည်သာဖြစ်ကြောင်း - စ၀်ယွက်စစ်က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြော၏။
“နအဖ က သူ့မဟာဗျူဟာအတိုင်းသူလုပ်မှာဘဲ၊ ပြည်သူအရေးစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု တိုးတက်ကြီးပွားမှာ၊ တိုင်းပြည်သာယာစိုပြေမှာကို သူမလိုလားဘူး၊ မိမိမွေးရပ်ကနေစွန့်ခွါကြလေ သူကကြိက်လေဘဲ၊ တိုင်းရင်းသားပိုင်ရေမြေတွေကို အပိုင်ရဖို့က စစ်အုပ်စုရဲ့ အဓိကမဟာဗျူဟာဘဲ” - ဟု စ၀်ယွက်စစ်က ဆက်ပြော ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားများ စည်းရုံးညီညွတ်မှုရမည်ကို နအဖ အင်မတန်စိုးရိမ်နေကြောင်း၊ မိမိအမျိုးသားကောင်းစားရေးအတွက် သာကြည့်ပြီး နအဖ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုနောက် လိုက်မည်ဆိုပါက အားလုံးရေတိမ်နစ်မည်မှာ မလွဲကြောင်း၊ စည်းရုံးညီညွတ်မှုဖြင့် လက်တွဲအဖြေရှာကာ စစ်အုပ်စု၏ ဖိနှိပ်မှုရန် တွန်းလှန်မှသာလျှင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတိုင်း တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနိုင်မည်၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို နအဖ သတိမူစေရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသေး သည်။
ထို့အတူ SSA ခေါင်းဆောင်စ၀်ယွက်စစ်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအားလုံး နေရပ်မှ စွန့်ခွါခြင်းသည် ပြဿနာဖြေရှင်း သည့် နည်းလမ်းမှန်မဟုတ်သည့်အပြင် စစ်အုပ်စုအသိုင်းအ၀ိုင်းတို့ အစားထိုးနေရန် ရှောင်တိမ်းပေးသကဲ့သို့ဖြစ်နေ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်မွေးရပ်မြေမှစွန့်ခွာခြင်းမပြုဘဲ သေတူ ရှင်မကွဲ ရရာလက်နက်စွဲကိုင်ပြီး လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲ ၀င်ကြဖို့ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသေးသည်။
SSA ခေါင်းဆောင် စ၀်ယွက်စစ်သည် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌဖြစ်၏။ ထို့ပြင် သျှမ်းပြည်တိုင်းရင်း သားများတန်းတူအခွင့်အရေးအတွက်ရှေ့တန်းတင်ပြီး သျှမ်း၊ ပအိုဝ်း၊ ၀ ၊ အခါ၊ လားဟူ နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားများပါ ၀င်သည့် သျှမ်းပြည်ကွန်ဂရက် ဖွဲ့စည်းစဉ်ကလည်း ဦးဆောင်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
တိုင်းရင်းသား FM ရေဒီယို စတင်အသံလွှင့်တော့မည်
တိုင်းရင်းသားဘာသာဖြင့်အသံလွှင့်မည့် FM ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို မေလ(၁)ရက်နေ့တွင် စတင်အသံ လွှင့်တော့မည်ဟု ရေဒီယိုတာဝန်ခံတစ်ဦးမှပြောပါသည်။ အဆိုပါရေဒီယိုအစီအစဉ်တွင် ဗမာဘာသာ၊ မွန်ဘာ သာနှင့် ကရင်ဘာသာဖြင့်အသံလွှင့်သွားမည်ဟုသိရပါသည်။
ယခင်ကအခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရ သော်လည်း ယခုအခါလိုအပ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ပြီးစီး၍ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်တော့မည်ဟု အဆိုပါ ရေဒီယို တာဝန်ခံတစ်ဦးမှပြောပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကတော့ မွန်ဘာသာဆိုရင် နံက်(၈)နာရီကနေ (၈)နာရီခွဲတစ်ကြိမ် ညနေ(၄)နာရီကနေ (၄)နာရီခွဲတကြိမ်လွှင့်ပါမယ်။ ကရင်ဘာသာကတော့ နံက်(၈)နာရီခွဲကနေ(၉)နာရီခွဲအထိ တစ်ကြိမ် ညနေ(၄)နာရီခွဲကနေ(၅)နာရီတစ်ကြိမ်လွှင့်ပါမယ်။ ဗမာအစီအစဉ်ကတော့ နံက်(၁ဝ)နာရီကနေ (၁ဝ)ခွဲအထိစ်ကြိမ် ညနေ(၆)နာရီကနေ(၆)နာရီခွဲအထိ FM (88) မီဂါဟပ်ကနေထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ တစ်ပါတ် ကို(၃)ရက်ပေါ့။ သောကြာ၊စနေ၊တနင်္ဂနွေရက်တွေမှာထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်။ အရင်ကခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့အတွက် ရေဒီယိုပရိသာတ်တွေကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်”ဟု အဆိုပါရေဒီယို တာဝန်ခံ မှရှင်းပြပါသည်။
အဆိုပါရေဒီယိုအစီအစဉ်များကို မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် ၊တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းအထိ သက် ရောက်မှုရှိသည်ဟု ရေဒီယိုအဖွဲ့ဝင်များ၏ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရသိရသည်။ ၄င်းတိုင်းရင်းသားဘာသာ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် (FTUB) ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားများသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်ဟု တိုင်းရင်းသားဘာသာရေဒီယိုတာဝန်ခံမှပြောပါသည်။
Burma Mon, Wa refugees flee to Thailand
Text of report by Norway-based Burmese Democratic Voice of Burma website, on 24 April
Hundreds of Mon refugees are fleeing into Thailand as tensions are rising after the New Mon State Party (MNSP) decided not to becomearegional militia unit as demanded by the military government.
Democratic Voice of Burma (DVB) Correspondent Ko Maung Too filed this report:
[Begin recording] [DVB] The NMSP decided not to becomeamilitia unit on Thursday [22 April] and clarified its decision atapress conference yesterday. Since then we understand that the State Peace and Development Council (SPDC) Army has reinforced its troops guarding bridges in Mon State, including the Ye Bridge.
Meanwhile, Mon people in Ye Township have started to flee across the border for the Halockhani Camp inside Thailand.
[Nai Chay Mon] Many people from areas deep inside Burma are fleeing to Halockhani Camp. We were able to provide temporary shelter for 225 mothers and children atamiddle school inside Halockhani Camp. That was all we can do.
[DVB] That was Nai Chay Mon, representative of the NMSP. He also said that the NMSP revolutionary troops and the SPDC Army are vigilantly watching each other.
[Nai Chay Mon] Some of our offices have been closed down. Presently, our two sides are watching each other.
[DVB] That was Nai Chay Mon who also added that there were more than 225 refugees and many more were arriving and there was an urgent need for emergency assistance.
[Nai Chay Mon] The Mon relief group could only supply rice for the 225 refugees who have to buy other needs to feed themselves. I have asked for help from people whom I believe can assist and I hope they will help us to the extent they can. [End recording]
That wasareport by Ko Maung Too.
Meanwhile, Wa refugees are also reported to be fleeing across the Thai border.
Wa refugees from Mong Ton in southern Shan State are fleeing for Chiang Dao in Chiang Mai Province of Thailand, according to local representatives.
The United Wa State Party (UWSP) rejected the demand of the SPDC to becomeaBorder Guard Force. Since then the SPDC Army has stepped up war preparations in the area and Wa people, fearing conflict, have fled across the border, according to refugees in Thailand.
Originally published by Democratic Voice of Burma website, Oslo, in Burmese 1430 24 Apr 10.
(c) 2010 BBC Monitoring Asia Pacific. Provided by ProQuest LLC. All rights Reserved.
မင်းထက်အောင်၊ ကောင်းဝါဧပြီ ၂၄၊၂၀၁၀။
မင်းထက်အောင်(ဧပြီ-၂၄)။ ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီလက်အောက်ခံ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးတို့အား ယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ အမြင့်ဆုံးတပ်လှန့်ထားကြောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များအရ သိရှိရသည်။
ထိုင်းနယ်စပ်တစ်နေရာ၌ ယမန်နေ့တွင် သတင်းထောက်များနှင့်မွန်ပြည်သစ်ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်ခြေးမွန်ပြောကြားရာ “မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရုံးတွေ ဒီနေ့ကစပြီး ပိတ်လိုက်ပြီ” ဟု ဆိုပါသည်။
သို့ရာတွင် မွန်ပြည်သစ်နယ်မြေအတွင်းသို့ နအဖတပ်များ ဝင်ရောက်ကျူးကျော်လာခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ စစ်အစိုးရပ်တပ်ဖွဲ့များ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုသာ ရှိနေကြောင်း ဒေသအသီးသီးရှိ မွန်ပြည်သစ်တပ်များနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များတွင် ပြောဆိုကြသည်။
ယမန်နေ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုချက်အရ ပြည်သူ့စစ်အသွင်မပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း အဆိုပါပြန်လည်အကြောင်းကြားစာကို အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်းထံ လွန်ခဲ့သည့် (၂)ရက်က မွန်ပြည်သစ်ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်မှ လူလွှတ်၍စာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထိုသို့ လူလွှတ်စာပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက် တိုင်းမှူးမည်သို့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်ကို မသိရှိရသေးပေ။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို ယခုလ (၂၁) ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေး ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ဗဟိုကော်မတီဝင်အများစုက နအဖတောင်းဆိုချက်ကို လက်မခံဟု ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ (၇)ရက်နေ့တွင် စရဖအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအကြီးအကဲများ တွေ့ဆုံခဲ့ကြရာ၌ မွန်ပြည်သစ်တပ်ဖွဲ့များ ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းလဲရေး ဧပြီလ(၂၂) ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထား၍ ရတခတိုင်းမှူးထံ အကြောင်းပြန်ရန် ဖိအားပေးပြောကြားခဲ့သည်ပြီးနောက် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပချိန်သည် နာရီပိုင်းအနည်းငယ်မျှသာကြာမြင့်ခဲ့ပြီး နအဖ၏အထက်ပါ အဆိုပြုချက်ကို လက်မခံဟု ဗဟိုကော်မတီအများစုက ဆုံးဖြတ်သဘောတူခဲ့ကြသည်။
စစ်အစိုးရနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်သဘောတူညီချက်များသည် နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့များ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသာဖြစ်ပြီး မွန်ပြည်သစ်တပ်ဖွဲ့များ တပ်နေရာတည်ရှိခွင့်နယ်မြေများကို စစ်အစိုးရသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
တဖန် နိုင်ခြေးမွန်က “ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က နှစ်ဖက်လူကြီးများ ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့အတိုင်း အပတ်အခတ် ရပ်စဲမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားပြီး နောင်တက်လာမယ့်အစိုးရသစ်နဲ့ တပ်နေရာချထားတာတွေ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားချင်တယ်”ဟု မွန်ပြည်သစ်က တောင်းဆိုထားကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ရေးဆွေးနွေးစဉ်ကာလတလျှောက်၌ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေဖြင့် ပါတီနှင့်တပ်ဖွဲ့များ အနာဂတ်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအရဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရသည် တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်သည့်အတွက် ၄င်းတို့သတ်မှတ်ပေး၍မရကြောင်း၊ နောင်တက်လာမည့် အစိုးရနှင့်သာ ဆွေးနွေးသွားရန်တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်သောကိုယ်စားလှယ်များ ပြောကြားခဲ့သည်။
Ethnic group in Myanmar gears up for war, peace
LAIZA, Myanmar — Crawling on their bellies, the recruits inch throughafield, dragging wooden rifles. A whistle blows, and they scramble to their knees, pulling the pins from imaginary grenades before lobbing them. Dropping flat, they yell "Boom!"
Atacamp alongsideariver, the next generation of soldiers in the Kachin Independence Army, one of Myanmar's largest armed ethnic groups, is training withanew urgency. A cease-fire is in peril, and the Kachin do not want to patrol the border for the ruling junta.
"I don't want to kill anyone but beingasoldier is the best way to change the conditions in Burma," said 23-year-old cadet La Ran, who joined four months ago. "I am ready to fight if I have to."
The possibility of armed conflict in Myanmar, also known as Burma, is rising becauseaseries of cease-fire agreements between the military government and more thanadozen armed ethnic groups are dissolving as the regime seeks to press those groups into becomingaborder militia under government control.
The government has setadeadline of April 28 for the armed groups to merge or disarm as the junta tightens its grip on the country ahead of this year's nationwide elections – the first in two decades. Their demands have largely been met with resistance during negotiations over the past year with the country's largest armed ethnic groups, including the 8,000-member Kachin army.
In the country's hinterlands – home toavariety of ethnic minority groups – the junta has also faced bitter opposition from the Wa, the Shan, the Karen and the Kachin, who are united in their resentment against historical domination by the Burmese. The Karen and the Shan, who have refused to sign truces, are engaged in intense fighting with government troops.
These groups control large territories along the northern and eastern borders – along with the valuable trade in logging, jade, gems, gold, and, in some cases, illegal drugs, that have helped finance their insurgencies.
The Kachin, predominantly Christian hill tribes in the northernmost part of Myanmar, have been engaged inadecades-long struggle against the government for autonomy.
Sinceacease-fire was signed in 1994, they have enjoyed de-facto self-rule: In the rebel-controlled area, the Kachin army powers the electric grid and runs hospitals while soldiers in green uniforms adorned with the Kachin flag monitor both the border with China and the frontier with government-controlled Myanmar.
But Kachin leaders are still hoping forapermanent solution. In the interim, they have rebuilt their army and their strength.
Over the weekend, the Kachin army and its political arm, the Kachin Independence Organization, adamantly rejected the government's border guard proposal atamass public meeting held in the small town of Laiza,arebel stronghold near the Chinese border.
"From the very beginning, the public didn't want the KIA to join the (border guard force)," said Gen. S. Gun Maw, vice chief of staff for the rebels, citing letters from thousands of people opposing the idea. "If they (the government) take the military way, it will beabig mistake for them."
Pulling up in trucks, motorbikes, buses and cars, more than 1,000 Kachin – many dressed in traditional headscarves and sarong-like longyi – packed intoalarge assembly hall. An overflow crowd watched intently on television monitors set up inasecond room.
From the start, the rebel leaders were careful to say their stand reflects the views of the majority of Kachin people, estimated at 1 million in Myanmar. Many in the audience nodded in agreement as their leaders outlined the political stalemate after more thanadozen talks with government leaders over the past 12 months.
"We've had the cease-fire for more than 10 years now. It'safriendly peaceful society now, and I want to keep this. But (the government) violates our rights and takes our land," said Zing Hang Khawn Hpang, 45,alocal trader who attended the weekend meeting.
The gathering was also intended to makearare appeal for international attention andasmall group of foreign journalists, including The Associated Press, were invited to attend. The remote and mountainous Kachin region has largely been off-limits to foreigners for years.
"Not many outsiders know very well what's happening in Burma and our region ... We hope that if they know, if they understand the situation in our region, they may be able to findaway to help us," Gun Maw said.
In Laiza,aborder town of 10,000 nestled inavalley between green hills, the standard of living is better than in other impoverished areas of Myanmar.
Control over two small hydroelectric dams, built with Chinese help, provide the area with 24-hour electricity – by comparison, residents in the largest Burmese city, Yangon, only getafew hours of power every third day. Chinese telecommunications towers just over the border ensure steady cell phone service, while brisk commercial trade meansasteady supply of Chinese goods, clothing and motorbikes displayed in storefronts on the main boulevard.
On the streets, people talk openly about politics – another marked difference from the tightly controlled regions of government-run Myanmar.
The stability has allowed Christianity, brought by missionaries in the 1800s, to flourish –arare display in an otherwise heavily Buddhist nation.
Standing outside the doors of the white-tiled Laiza Kachin Baptist Church, resident Dau Lum, 36, expressed faith thatapolitical compromise can be reached before fighting erupts.
"I try not to worry too much because the world is watching Burma so the Burmese government doesn't want to start the fight. Even if conflict happens, it will not be like those in the past. I believe that God will guide us toagood future," he said.
Though Kachin leaders are still pushing forapolitical solution that includes protection of ethnic rights and government-recognized self-rule, their commanders are preparing for the worst. From the Kachin army's headquarters, perched high up on the mountainside overlooking the town, they have launchedanew push for training and recruitment.
More ominously, the Burmese side has also stepped up its military activities. Kachin residents report army convoys rumbling through the northern countryside in recent weeks near the regional capital of Myitkyina, which is under government control.
But any fighting in northern Myanmar would surely provoke China, the junta's biggest political ally, which has warned the Burmese government to guard against instability on its borders. Last summer, heavy fighting between troops and the Kokang ethnic group sent some 30,000 refugees across the border into China, promptingarare reprimand from Beijing.
The Chinese leadership is inabind, caught between its dislike of border instability and its access to the oil, natural gas, and timber that the junta provides. That makes it hard to divine how deeply Beijing will involve itself.
"We know the Chinese government has influence over the (Burmese government). We want them to use this to make change in Burma, but we're not sure whether the Chinese government will," said the Kachin army's Gun Maw.
Lamai Tang Gun, 59,aBaptist pastor from Myitkyina, notes the Kachin have lived with an uneasy peace for decades: "They (the junta) are always threatening us. We can't tell if there'sapossibility of fighting. We can only pray to God."
ရန်ကုန်ဗုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ရက်အလွန်မှာ စစ်အစိုးရအာဘော်ကိုရေသားနေတဲ့(၁၇)ရက်နေ.ထုတ်ကြေးမုံသတင်းစာ မှာ (ကျော်ရဲမင်း)ဆိုတဲ့စာတတ်ငမိုက်က (မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်အလှဖျက်ဆီးသူများပြည်သူ.အားနဲ. ဝိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်ဟန်.တာ) ခေါင်းစဉ်နဲ.ရေသားခဲ့ပါသည်၊အကြမ်းဖက်အဖျက်သမားလူရမ်းကားတွေဟာ ကျွန်တော်တို.ပြည် သူများကြားထဲမှာပဲအသွင်းအမျိုးမျိုးယူပြီးခိုးအောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်၊အဖျက်သမားမှာချိုမပါလို.အလွယ်တကူမခွဲခြား၊မ သိမြင်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို.သာမန်ပြည်သူတွေထဲမှာရောနှောဝင်ရောက်ပြီး... စသဖြင့်ဆိုလိုရင်းတစ်ပိုဒ်ကိုရေသားတာတွေ. ရပါသည်၊
တိုင်းရင်းသားအသံပြောချင်တာက-အဖျက်သမားမှာချိုမပါပေမဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ.လူထုအာဏာကိုလုယူထားတာကိုကမ္ဘာ အသိဖြစ်ပါသည်၊ကျော်ရဲမင်းကိုစာပေရသနဲနဲလေးပြောပြချင်တယ်၊ ခြေနှစ်ချောင်းသတ္တဝါတွေမှာ ချိုမထွက်ပါ၊စွယ်ပဲထွက် တတ်ပါသည်၊ခြေလေချောင်းသတ္တဝါတွေမှာပဲချိုတွေထွက်တတ်ကြပါသည်၊ဒါကြောင့်မို.၊ ခင်ဗျားတို. စစ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာ အစွယ်တွေထွက်နေကြပါသည်၊ မောင်သန်းရွှေတို.၊ရွှေမန်းတို.၊မှာစွယ်ထွက်နေပြီး ကျော်ဆန်းမှာဆိုရင် စွယ်ပုပ်နေပြီး သွားနံ.စော်နေပါသည်၊
အကြမ်းဖက်အဖျက်သမားတွေဟာသာမန်ပြည်သူတွေထဲမှာရောနှောဝင်ရောက်နေတယ်ဆိုတာလုံးဝမှန်ပါသည်၊ခင်ဗျားတို. ခွေးစစ်ဗိုလ်တွေက စစ်ယူနိဖောင်ယာယီချွတ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို.လုပ်နေတယ်၊ပုပ်သင်းညိုးအရောင်ပြောင်းသလိုလုပ်နေ ပါသည်၊လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကစ၍ စစ်သားကိုအရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေမှာပြောင်းရွှေ.ပေးနေပါသည်၊ခင်ဗျားတို.ကိုယ် တိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေဖြစ်နေတာကြောင့် လူထု၏အရေးယူခြင်းကိုခံရပါလိ.မ္မည်၊
ခင်ဗျားတို.က ပြည်သူလူထု၏ဆင်းရဲခုက္ခတွေကိုပမာမထားကရုဏာတရားကင်းမဲ့ပြီးအနန္တဂုဏ်တော်(၅)ပါးအပေါ်မှာပြစ်မှား ကျူးလွန်နေတာကြောင့် ကမ္ဘာအသင်္ချေတစ်သိန်းမက အဝစိငရဲမှာခံရပါလိ.မ္မည်၊ကိုယ့်လူမျိုးကောင်းစားရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပြစ်ကြီးပြစ်ငယ်တွေကိုရဲရဲပက်ကျူးလွန်တာကိုကံ တရားကခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာသိစေချင်ပါသည်၊ကိုယ့်လူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက်အခြားသောလူမျိုးတွေကိုဒုက္ခ ပေးဖို.မဟုတ်၊ရဲဘော်မသေ၊သေသော်ငရဲမလာ ဆိုတာကိုလည်း စစ်သားလုပ်ပြီးမုဒိန်ကျင့်ဖို.မဟုတ်၊အပြစ်မဲ့လူထုကိုစော်ကာ ဖို.မဟုတ်၊ရန်သူမဟုတ်သူများကိုသတ်ဖြတ်ဖို.မဟုတ်ပါ၊ကိုယ့်လူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက် ငါ အဝိစိငရဲရောက်ရင်ရောက်ပါ စေဆိုပြီးကြိမ်မောင်နေသူများသည် သူယုတ်မားတို.၏အပြောအဆိုသာဖြစ်ပြီး လူမိုက်တို.၏လုပ်ရပ်တွေသာဖြစ်ပါကြောင်းအ သိပေးချင်ပါသည်။
ဗမာစစ်အစိုးရသည် အရေးကြီးသည့်အချိန်အခါရောက်လာတိုင်မှာ လိမ်လည်မှုနည်းဗျူဟာနှင့်လူထုကိုလုပ်ကြံသည့်နည်းဗျူ ဟာများအသုံးပြုကာ သူတို.လုပ်ချင်သည့်မတရားလုပ်ရပ်များကိုအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစေရန်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်အောင် ဖန်တီးလေ့ရှိသည်၊ လူ အယောက် ၂၀ ကျော်သေဆုံးပြီး ၈၀ ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားသည့်ရန်ကုန်ဗုံးဖောက်ကွဲမှုသည် စစ်အစိုးရ လက်ချက်နဲ.မကင်းနိုင်ဘူးလို. တိုင်းရင်းသားအသံမှယုံကြည်သည်၊
တိုင်းပြည်နှင့်လူထုအပေါ်စေတနာယုတ်မာပြီးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားသည့် စစ်အစိုးရသည်ပြည်သူလူထုများ၏အသက်ဝိဥာဏ်ကို ပုရွတ်ဆိတ်လိုသဘောထားပါသည်၊ ကိုယ့်အာဏာတည်မြဲရေးနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်းသည့်ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်များ သည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ကြပါသည်၊
လက်ရှိဗမာပြည်အခြေအနေသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ရှိသည်၊တိုင်းရင်းသားတပ်များကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အ သွင်းပြောင်းရန်အကြပ်ကိုင်နေပါသည်၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ရပ်စလုံးဟာ လူထု၏ထောက်ခံမှုလည်းမရှိ၊တိုင်းရင်းသားများ ၏သဘောတူညီမှုလည်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စစ်အစိုးရအနေနဲ. အကြောင်းပြချက်ရှိစေရန်အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဖန် တီးပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်များအပေါ်အပြစ်တင်နိုင်ပါသည်၊ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် တိုင်းရင်းသားတပ်များကို ရှင်းလင်းရန်လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားအသံမှတင်ပြအပ်ပါသည်၊
ထိုင်းဆန္ဒပြသူအနီရောင်အုပ်စုများနှင့်ထိုင်းစစ်တပ်နှင့်လုံခြုံရေးရဲများထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပွားကာလူ(၁၁)ယောက်သေ ဆုံးပြီး၊ ၅၂၁ ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါသည်၊သေဆုံးသည့်အထဲမှာ စစ်သား ၂ ယောက်ပါဝင်ပြီး အရပ်သား ၂
နှင့် ဂျပန်သတင်းထောက်တစ်ယောက်ပါဝင်သည်ဟု အေရာဝမ်အရေးပေါ်ဆေးခန်းကအတည်ပြုပြောကြားသည်၊
အနီရောင်ဆန္ဒပြသူများသည် အမ် ၇၉၊မီလောင်ဗုံများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသည်ဟုသိရပါသည်၊စစ်သား နှင့် ရဲများက မျက်ရည်ယိုဗုံများနှင့် ပလပ်စတစ်ကျဉ်ဆံများကိုအသုံးပြုသည် ဟုသိရပါသည်၊လက်ရှိအခြေအနေမှာ နှစ်ဘက်စလုံးဆုတ် နေပြီး အခြေကုတ်စခန်းမှာနေရာယူကြပါသည်၊
သတင်း Breaking News
Bullshit Free Zone ချေးတုတ်ရဲမြင့်မဝင်ရနယ်မြေ
စစ်အစိုးရ နဲ့ တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခ
လွန်ခဲ့တဲ့ (၄၈) နှစ်က စစ်အာဏာသိမ်းကတည်းက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရတွေဟာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု အားကောင်းဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့  တောင်းဆိုခဲ့မှုကို ဂရုမစိုက်တာများပါတယ်။ စစ်အစိုးရ နားလည်တဲ့ အမျိုးသားစည်းလုံးရေးဟာ အမိန့်နာခံရေး ဖြစ်နေတာကြောင့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေ ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ ၁၉၇၄ မှာ တပါတီ ဆိုရှယ်လစ်အခြေခံ ဥပဒေကို ပြဌာန်းပြီး ချင်း၊ ရခိုင် နဲ့ မွန်ပြည်နယ် သတ်မှတ်ချိန်မှာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ပေါင်း (၂၀) ကျော် ရှိနေပါပြီ။ ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတော့မှ စစ်အစိုးရဟာ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်က တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို တဖက်သတ်ပြဌာန်းပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပုံစံတွေ ဖော်ပြထားပေမယ့် လက်တွေ့ကတော့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အားလုံးကို ဗမာစစ်တပ် လက်အောက်ခံအဖြစ် သိမ်းသွင်းနေတဲ့အတွက် ဗမာစစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြား အချိန်မရွေး စစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေပါတယ်။ လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ လူအင်အားများတဲ့ စစ်အစိုးရဟာ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာကို လက်နက်နဲ့ မဖြေရှင်းနိုင်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကြားထဲ စီးပွားရေးပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက် တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ ဗမာစစ်အစိုးရကို အယုံအကြည် ကင်းမဲ့လာပါတယ်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကို ဗမာစစ်အစိုးရက ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Amnesty International နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ချုပ်က လွန်ခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ (၆၆) စာမျက်နှာ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ တိုင်းရင်းသား (၇၀၀) ကျော် ပေးတဲ့သတင်း အချက်အလက်ပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ အစီရင်ခံစာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးလာသူတွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေက ပေးတဲ့ သတင်းတွေကိုလည်း ရယူပါတယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို တိုင်းရင်းသားတွေက ပြည်နယ် (၇) ခုစလုံးမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ စစ်အစိုးရပြောသလို သောင်းသောင်းဖျဖျ ထောက်ခံတာမဟုတ်ဘဲ နေရာအနှံအပြားမှာ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရရဲ့  လုပ်ရပ်တွေကို သဘောမတူကြောင်း ငြိမ်းချမ်းစွာကန့်ကွက်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီး နှိပ်စက်ကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအများစုဟာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အန်အယ်လ်ဒီ ကို ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အန်အယ်လ်ဒီ သို့မဟုတ် ဒေသခံ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်သူကိုလည်း စစ်အစိုးရက ရန်ရှာပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ပတ်သက်တယ်လိုပ ယူဆတဲ့ တိုင်းရင်းသားအရပ်သားတွေကို အပြစ်ရှာပြီး အပြင်းအထန် အရေးယူပါတယ်။ ဥပမာ SSA (Shan State Army) တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော် နဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ ဗမာစစ်တပ်က မသင်္ကာတဲ့ တိုင်းရင်းသားအရပ်သားတွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်း သတ်ဖြတ်ပုံတွေကို လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗမာစစ်အစိုးရဟာ သူချုပ်ကိုင်လို့မရတဲ့ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေကို အပြစ်ရှာဖို့ အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း တိုင်းရင်းသားတွေဟာ စစ်အစိုးရ နှောက်ယှက်တာကို ခံနေရပါတယ်။ ရှမ်းနဲ့ ကရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့  စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတွေကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်က မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေအားလုံး စစ်အစိုးရ ဖိနှိပ်ညှဉ်းပမ်း အနိုင်ကျင့်တာ ခံနေကြရပါတယ်။ စီးပွားရေးအခြေခံတွေ တည်ဆောက်တဲ့ စီမံကိန်းတွေကြောင့်လည်း တိုင်းရင်းသားတွေ နစ်နာဆုံးရှုံးနေကြရပါတယ်။
ဥမာ တရုတ်ပြည်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရောင်းစားဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှာ ရေကာတာ တည်ဆောက်တာဟာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့  ဘ၀ဓလေ့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ မိမိဘဝ ထိခိုက်ပျက်စီးမှာကို စိုးရိမ်လို့ ကန့်ကွက်တာကို စစ်အစိုးရက မညှာမတာ တုံ့ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားဒေသန္တရအစိုးရကို တည်ထောင်ဖို့ အလားအလာရှိပေမယ့် အတိုက်အခံ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေ အနိုင်မရအောင် စစ်အစိုးရက ကြံစည်နိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူက ရွှေဓါတ်ငွေ့နဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်း စီမံကိန်း၊ ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီမြစ်စုံ ရေကာတာ၊ ရှမ်းပြည်နယ်က တာဆန်းရေကာတာ၊ ကရင်ပြည်နယ်က ဝဲကြီး၊ ဟတ်ကြီး နဲ့ ဒါးဂွင် ရေကာတာ စတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြပေမယ့် အစိုးရတပ်က အလုံးအရင်းနဲ့ နေရာယူပြီး ဒေသခံတေါကို ဖိနှိပ်ထားပါတယ်။ သေနတ်ပြပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလေလေ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်သူတွေ အပြင်းအထန် နှိပ်ကွက်ခံရလေလေ ဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်း နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ က သုံးသပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ချက်တွေကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ Amnesty International အဖွဲ့က ဗမာစစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တိုင်းရင်းသားများအပေါ်ရိုသားမှုမရှိ၊ကတိမတည်တဲ့လူလိမ်များဖြစ်သည်၊ထို.ကြောင့်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနေဖြင့် ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်များနဲ.ကင်းကင်းကွာကွာနေသင့်ပြီးကိုယ့်လွတ်မြောက်ရေးအတွ က်ကိုပဲစီမံကိန်းချမှတ်ပြီးဦးတည်ကြပါ၊ထို.လူတွေနဲ.ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို.လူမျိုး၊ဘာသာစကား၊ သာသနာ၊ယဉ်းကျေးမှုပပျောက်သွားရုံသာမက သမိုင်းမှာလည်း ”လူအ လူညံ့” လူမျိုးအဖြစ်သူများရယ်စရာရေသားခံရ လိမ်မည်ကို သတိမူသင့်ပါကြောင်း တိုင်းရင်းသားအသံမှထပ်ခါတလဲလဲ သတိပေးလိုက်ပါသည်၊လူလိမ်တွေနဲ.စကားပြော ဆိုမှုကိုရှောင်ကြည်ပါ၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ကြည်ပါ၊၃နှင့်၎သကဲ့သို.နေထိုင်ကြပါ၊လွတ်လပ်မှုအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုပမ်းကြ ပါ၊
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု SSA ခေါင်းဆောင် စ၀်ယွ...